अब एसईई परीक्षा प्रदेशस्तरीय हुने, कक्षा १२ काे परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बाेर्डले लिने ! « Bagmati Online
अब एसईई परीक्षा प्रदेशस्तरीय हुने, कक्षा १२ काे परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बाेर्डले लिने !
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) प्रदेशस्तरमा सञ्चालन हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक विकास समितिमा ८ कक्षाको परीक्षा स्थानीय सरकारले, एसईईको प्रदेश सरकारले र १२ को संघ (राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड) ले गर्ने सहमति जुटेको हो । यो प्रस्तावलाई अब मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजाने शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । यो वर्ष एसईईको र क्रमश : कक्षा ८ र १२ को परीक्षा गर्ने योजना शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको छ । ‘समितिमा सहमति जुटेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि लागू हुन्छ’, शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
संघीयताअनुसार शिक्षाको कार्यान्वयन गरिने शिक्षासचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए । ‘विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । परीक्षा र शैक्षिकसत्र व्यवस्थापनको विषयमा छिट्टै निर्णय हुन्छ । संघीयताअनुसार शिक्षाको कार्यान्वयन हुन्छ’, उनले भने । तर, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा ९ को रजिष्ट्रेसन फारम र कक्षा १० (एसईई) को आवेदन फारम भने खुलाइसकेको छ । १६ पुसदेखि २१ माघसम्ममा विद्यालयले विद्यार्थीको रजिष्ट्रेसन र आवेदन फारम भराइसक्न बोर्डले भनेको छ ।